AFCON: ‘Tinosvika kure’ | Kwayedza
26 Apr, 2019 - 00:04	 2019-04-25T08:49:15+00:00 2019-04-26T00:04:23+00:00 0 Views
MUTUNGAMIRIRI wesangano reZimbabwe Football Association Zifa) – Felton Kamambo – anoti chikwata chemaWarriors chine vatambi vakawanda vepamusoro saka vanofanirwa kutamba zvinogutsa kudarika zvavaimboita kare mumutambo weAfrica Cup of Nations (AFCON) uyo uchatanga munguva pfupi iri kutevera.
Mutambo uyu uchatanga nemusi wa21 Chikumi apo MaWarriors achasangana nechikwata cheEgypt icho chichange chiri pamusha. Zvikwata zviviri izvi zviri muboka reGroup A pamwechete nezvimwe zvinoti Democratic Republic of Congo (DRC) neUganda.
Munhorowondo yenhabvu yemaWarriors achienda kuAFCON, chikwata ichi chaingokundirwa kumagroup-stages. Asi, Kamambo anoti boka rakaiswa maWarriors svondo radarika pamberi rakanaka saka chikwata chavo chiri kufanirwa kubata basa sebasa.
“Draw raive rakanakisa chaizvo. Chikwata chedu chiri kufanirwa kutamba zvakanakisa, zvepamusoro kudarika zvachakamboita kare.
“Tine chikwata chakanakisa chaizvo chine vatambi vepamusoro vanogona kubata basa sebasa,” anodaro Kamambo.
Vatambi vepamusoro vari muchikwata chemaWarriors vanosanganisira kaputeni Knowledge Musona, Khama Billiat, Marvelous Nakamba, Tinotenda Kadewere naGeorge Chigova.
Japhet “ShortCat” Mparutsa – uyo aimbove mubati wepagedhi weDynamos, Black Rhinos nemaWarriors – anoti mukana mukuru uripo wekuti chikwata chenyika ichi chisvike kure asi hunge chatanga zvakanaka mumutambo wacho neEgypt. Anoti zvakakosha kuti maWarriors awane zvibodzwa pamutambo uyu.
“Kana tikakwanisa kuwana chibodzwa chimwechete kana zvitatu paEgypt, mutambo unenge wavhurika. Asi tikakundwa zvinogona kutiomera nekuti Congo chikwata chakasimba zvikuru,” anodaro ShortCat.
Anoti DRC ichange ine huturu hwekundwa kwayakaitwa nemaWarriors nguva yadarika mumutambo wekurwira tikiti rekuenda kuAFCON.
“Zvasiyana manje nepakurwira kuenda kuAFCON nekuti zvikwata zvese zvichange zviri kumakwishu aya zvichida kuhwina.
“Asi tinogona kupedza tiri pechipiri muboka redu, hunge tikatanga zvakanakisa pamutambo wekutanga uyo tichasangana neEgypt,” anodaro Mparutsa.
Shasha pakutsigira nhabvu – Chris “Romario” Musekiwa – anoti gore rino nderemaWarriors nekudaro anofanira kuita zvinorova kumutambo uyu.
Anoti pazvikwata zvese zvichasangana nemaWarriors, Egypt chete ndiyo yega ingatyise.
“Draw takariona, rakanakisa chaizvo uye takaritambira. Chikwata chedu chine mukana mukuru wekusvika kure mumutambo uyu.
“DRC ingatityise nekuti inenge ine huturu hwekuikunda kwatakaita pakurwira kuenda kumakwishu aya, asi hedu tinoziva kuti toipedzera.
“Chikuru chinongodiwa kuti tigadzirire zvakasimba kuenda kumutambo uyu chete nekutamba mitambo yehushamwari nezvikwata zvepamusoro,” anodaro.